Maxaad Coinbase ayaa lagu eedeeyay Xammuul network Seeraar iyo sida SegWit shuqullada ? - Blockchain News
Iyo sida injineerada badan Coinbase ayaa loo baahan yahay inay soo bandhigto SegWit.
on February 5, sarrifka Coinbase Cryptocurrency kaalinta Tweet a, warrami in “kooxda horumarinta waa marxalad la soo dhaafay ee imtixaanka SegWit”, iyo “dirista iyo helista bitcoins taageero SegWit laga heli karaa in dhowr toddobaad doonaa”.
Coinbase dhawaaqay shaqada on SegWit horraantii December sanadkii la soo dhaafay, u jawaabay mid ka mid ah su'aalaha inta badan la weydiiyay ka users “sida badan Coinbase injineero ayaa loo baahan yahay inay soo bandhigto SegWit.”
on December 16, Madaxweyne ku xigeenka Coinbase Dan Romero daabacay post a on blog rasmi ah Coinbase, warrami in hordhaca ah ee SegWit waxaa loo qorsheeyay 2018, oo la joogo kooxda waa “ka shaqeeya fulinta si ammaan ah SegWit.” Romero ku nuuxnuuxsaday, in “in mudnaanta – ammaanka iyo shaqo hufan ee is-dhaafsiga”, iyo ma hadli shuruudaha gaarka ah.
Si kastaba ha ahaatee, on ruxruxo ee December ee “Seeraar maangal”, users carada koray la busyness network ee: is-weydaarsiga, oo ay ku jiraan Coinbase iyo GDAX, Ma aysan awoodin si ay ula qabsadaan record baahida iyo offline tegey, ujrada iyo waqtiga xaqiijin macaamil ah ayaa sii kordhaya. Bartamihii bishii January, macaamiisha diray CEO Coinbase Bryan Armstrong codsi ah in ka badan ururiyay badan 12,000 saxiixyada, baaqaya taageero SegWit sida mudnaanta koowaad u ah 2018. Jameson Race, Injineer ugu horeeysa ee BitGo jeebka ku crypto, ku baaqay in baxsi ah ee adeegyada Coinbase: “Ma aha daahfurka in sabab weyn oo overloads in network Seeraar waxaa uu keeno adeegyada caanka ah sida Blockchain.info, Coinbase iyo Gemini, taas oo aan haboonayn u isticmaalaan meel block. Haddii aadan rabin in ay gacan ka this, ha u isticmaalin. ” Armstrong mar kale ku jawaabay dacwadaan, isagoo sheegay in “Coinbase ayaa ka shaqaynaysa xawaalad packetizing, SegWit iyo tiro ka mid ah xeeladaha kale si loo baabi'iyo fadhiidka ah ee shabakadda.”
SegWit ay higsaneysaa in ay xaliyaan dhibaatada scalability ah by yaraynta tirada xawaalad. maamuuska waxaa la soo jeediyay by sameeysa ee Blockstream Peter Wellle, iyo softphone in suurta isticmaalka SegWit, ka dhacay shabakada Seeraar bishii August ee sanadkii hore. Waxaa ka mid ah adeegyada ay hore u taageeri technology – boorsada Ledger, ammaan, Electrum iyo Samourai Salada, iyo sidoo kale Crypto-is-weydaarsiga HitBTC, ShapeShift iyo Bitstamp. Si aad u fahamto sida SegWit caawisaa network Seeraar ah, waxaa lagama maarmaan ah in la qiyaaso heerka ugu fudud ee caadiga ah ee maalin walba ah Seeraar-xawaalad in safraan network Seeraar ee foomka of “macluumaad xirmooyin”, oo ay xaqiiq tahay iyo saxsanaanta la hubinayaa by qanjidhada. Haddii qanjidhada oo dhan isku raacsan yihiin in macaamil ganacsi ee ay tahay mid sax, ka dibna loo dhanyahay la gaaray. macaamil laftiisu wuxuu ka kooban yahay laba qaybood: iyo wixii soo baxayey – “talooyin” iyo “exit”, kaas oo qaybta hore ayaa mas'uul ka ah “ibo”, in uu yahay, helitaanka bitcoins (oo waxaa ku qoran warar ku saabsan diraha), iyo labaad – waayo, “quful” waayo, shixnad kara mustaqbalka. xogta aqbasho ayaa sidoo kale waxaa ku jira saxiixa ah oo caddeynaya waraaqo ka mid ah furayaasha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dadweynaha.
SegWit technology (takooran Witness) jajabiyaa macaamil laba qaybood oo ku wareejinaya saxiixa (“markhaati”) lagama maarmaanka u ah “furid” ka bitcoins helay, dhammaadka macaamil, ka baxsan block ugu weyn. Kiiskan, unit ugu weyn waxaa ku jira xog ku saabsan qaataha iyo diraha, iyo “markhaati” waxaa ku jira qoraallo iyo saxiixyada, in uu yahay, macluumaadka in lagama maarmaan ah si loo xaqiijiyo macaamil, laakiin markaas marna waxaa loo isticmaali doonaa. Iyada oo la tixgelinayo in saxeexyada degan ku saabsan 60% ee mugga macaamil, ay go'doomin si weyn u yaraynaysaa size block, markaa si ay kordhaan bandwidth network iyo yaraynta kharashka soo oogay macaamil.
Qoraa: Richard Abermann
Ron Paul sharciyeeyaa ...
Mark Cuba ee Dallas ...
POS tafaariiqda Crypto ...
Post Previous:Coincheck dhawaaqay celinta bilaabaan isbuuca soo socda
Post Next:Mario Draghi: Xeerarkii Seeraar ma aha masuuliyadda Afkhanistan ee
these details ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 3, 2018 at 7:15 AM